Waxyaabaha Laydhka Iftiiminta ee Laydhka Si Loo Galiyo Suuqa Japan - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Hoyga > Warka Warshadaha > Waxyaabaha Laydhka Nalalka Si Aad U Gasho Suuqa Japan
Marka hore, jaangooyooyinka shahaadooyinka nalalka Japan
Sida laga soo xigtay sahaminta macluumaadka Te, Japan ma jiraan heerar rasmi ah oo laydhka nalalka iftiimiya iyo caddaynta. Ururka Soosaarayaasha laambadda korontada ee Japan waxay diyaariyeen jaangooyada warshadaha Japan (JIS) oo loogu talagalay nalalka LED-ga ee qeexaya badbaadada xogta asalka ah, laakiin tan waxaa la siin doonaa oo keliya illaa sanadka dambe. Waqtigan xaadirka ah, nalalka qiimaha hooseeya ee laydhku waxay hareeyeen suuqa oo dhan, soo bandhigida heerarka laydhka LED-ka ayaa soo dhaw, shirkadaha dibada ee hadda doonaya inay galaan suuqa Japan ayaa laga yaabaa inay tixraacaan labada shahaado ee soo socda.
1, Shahaadada JIS (Heerarka warshadaha Japan)
Shahaadada JIS waa sharciyo heer qaran oo warshadeed lana aqoonsan yahay, heerarka iskaa wax u qabso. Heerarka shahaadada JIS ee hababka cabbirka waxay u baahan yihiin inay hubiyaan nambarka nuuca, cabirrada, shaqada iyo amniga dhinacyada alaabooyinka Marka tayada wax soo saarka ee waafaqsan jaangooyooyinka JIS ee hubinta tayada, si habsami leh loogu dhex gelin karo suuqa Japan. Suuqyada dibedda wadar ahaan 12 dal iyo gobol ayaa hadda adeegsada heerka shahaadeynta JIS: Kuuriya, Waqooyiga Kuuriya, Shiinaha Shiinaha, Shiinaha, Indooniisiya, Filibiin, Myanmar, Thailand, iyo Fiyet Nam, iyo Malaysia, iyo Hindiya iyo Mexico.
2, Shahaadada PSE
Doonaya inay gasho suuqa shirkadaha korantada ee Japan, badbaadada PSE waa shahaado khasab ah. PSE waxay leedahay 2 nooc oo ah calaamadaha shahaadada: PSE Diamond markation (waa qasab) waxaa loo isticmaalay badeecada la cayimay, calaamadaha PSE Circle (iskaa wax u qabso) waxaa loo isticmaalay shahaadada alaabta aan la cayimin. Shahaadadan oo keliya Japan ayaa mas'uul ka ah soo saarayaasha ama soo dejiyeyaasha, halkii ay ka ahaan lahaayeen soo saarayaasha ajaanibta ah, Japan shahaadada aadka u adag oo leh sumcad sare.
:Warshadaha Laydhka LED-ka Oo Ay Sababtay Suuqa Sare "Burburin"